Olee otú ederede site na iPad Obere 3 / iPad Air 2 / iPad Air
> Resource> iPad> Top Ụzọ izipu ozi ederede site iPad
Ụfọdụ iPad ọrụ jụrụ "Enwere m ike ederede site m iPad". Chọpụta, ị maara, iPad agaghịkwa naanị ọrụ dị ka a mbadamba na-egwu egwuregwu, gee ntị na music, ma ọ bụ ịwagharị na internet. Ugbu a, i nwere ike ọ bụghị naanị ime ka oku, ma na-ezigakwa ozi ederede site na iPad. Na e nwere ndị multiple ụzọ ederede site iPad. Ka-amalite na kacha ụzọ izipu ederede site iPad.
Send Text si iPad na iMessage ndị ọzọ Apple Ọrụ
Ọ bụrụ na ị maara na ndabara ngwa na-abịa na iPad, ị ga-ahụ Ozi ngwa na ya. A na ngwa-enye gị ohere izipu ozi ederede na foto gị iPad ọzọ iOS ngwaọrụ n'elu Wi-Fi ma ọ bụ cellular data. Na ederede -messaging bụ free. Ọ bụrụ na ị na-eji cellular data izipu iMessage, nanị ihe ọ na ebubo ndị unu maka cellular data ọrụ, ọ bụghị ozi ederede. N'okpuru ebe a bụ mfe nzọụkwụ aka iMessage na gị iPad izipu ozi ederede site iPad.
Nzọụkwụ 1. Hụ na iPad na-agba ọsọ na iOS 5 ma ọ bụ mgbe e mesịrị. Ọ bụrụ na ọ bụghị, mgbe ahụ i kwesịrị imelite ya.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPad ka a anụ Wi-Fi ma ọ bụ cellular data.
Nzọụkwụ 3. Mee ọ rụọ ọrụ gị iMessage na gị Apple ID na gị iPad site taping Ntọala> Ozi> swipe iMessage ka ​​NA. Pịa Send & Anata> mgbata Jiri gị Apple ID maka iMessage.
Nzọụkwụ 4. Na mmapụta window, gị banye Apple ID na paswọọdụ. Mgbe nke a, ndị mmadụ ga-enwe ike iji kpọtụrụ gị na iMessage na nke a email adreesị.
Nzọụkwụ 5. Mgbe ị chọrọ ederede site gị iPad, ị kwesịrị ị na enweta na Ozi ngwa> na Ozi, enweta Dezie icon ibà a nọmba ekwentị ma ọ bụ adreesị ozi-e (ma ọ bụ kpatụ icon ịhọrọ kọntaktị)> pịnye ke ederede ma ọ bụ mgbata igwefoto na akara ngosi ka ịgbakwunye a foto ma ọ bụ video> mgbata Send ịrụcha.
Send ozi ederede site na iPad ọ bụla ọzọ na ekwentị mkpanaaka Ọrụ
iMessage naanị-enye gị ohere izipu ozi ederede na iMessage ndị ọzọ Apple ngwaọrụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka iziga ozi ederede site na iPad na-abụghị Apple ngwaọrụ ọrụ, mgbe ahụ, ị ga-agbalị-atọ ndị ọzọ ngwaọrụ nke iPad, dị ka ndị a ma ama n'anya, WhatsApp, Skype, Facebook ozi.
Ọ bụrụ na ị na-eji iMessage, WhatsApp ma ọ bụ Facebook ozi izipu na-enweta ozi ederede na iPad, mgbe ahụ, mgbe ọ bụla ị accidently ihichapụ ha, ị nwere ike nweta ha azụ site na isoro ndu weghachite ehichapụ ozi ederede >>